Nagu saabsan - ZhangZhou Wanaagsan Soo Dejinta iyo Dhoofinta Co., Ltd.
Shirkad heer sare ah, oo in ka badan 10 sano ku jirta ganacsiga soo dejinta iyo dhoofinta, isku dhafka dhammaan dhinacyada kheyraadka oo lagu saleynayo in ka badan 30 sano oo waayo-aragnimo ah soo-saarista cuntada, waxaan bixinnaa oo keliya maaddooyinka cuntada caafimaadka qaba iyo kuwa aaminka ah, laakiin sidoo kale alaabada la xiriira cuntada - cuntada xirmo iyo mashiinada cuntada.
Iyada oo diiradda la saarayo silsiladda min min ilaa miis, Shirkadda Wanaagsan waxaa ka go'an inay si joogto ah u siiso alaab cunto caafimaad leh oo ammaan ah iyo baakadaha cuntada xirfadleyda ah iyo xalka mashiinnada cuntada ee macaamiishayada si loo gaaro guul-guul.
At Excellent Company, Waxaan hiigsaneynaa heer sare wax walboo aan sameyno. Iyada oo falsafadeena ay tahay mid daacad ah, aaminaad, faa iidooyin, guul-guul, Waxaan la dhisnay xiriiro adag oo waara oo lala yeesho macaamiisheena.
Ujeedadayadu waa inaan dhaafno rajada macaamiisheena. Taasi waa sababta aan ugu dadaalno inaan sii wadno siinta macaamiisha waxsoosaar tayo sare leh, ugu fiican ka hor adeegga iyo ka dib adeegga mid kasta oo ka mid ah alaabteenna.
Shirkadda Soo Dejinta & Dhoofinta ee Zhangzhou waxay ku taalaa magaalada Zhangzhou, oo u dhow Xiamen, gobolka Fujian ee Shiinaha. Shirkadeena waxaa la aasaasay 2007 iyadoo ujeedadu tahay dhoofinta iyo qaybinta cuntada.
Shirkadda Zhangzhou Excellent waxay si guul leh uga shaqeynaysay suuqa cuntada caalamiga ah. Shirkaddayadu waxay dhistay sumcaddeeda sidii alaab-qeybiye caafimaad iyo tayo sare leh. Macaamiisha ka socda Ruushka, Bariga Dhexe, Latin America, Afrika, Yurub iyo waddamada Aasiya qaarkood ayaa weli aad ugu qanacsan alaabtayada. Haysashada awooda teknoolojiyada ee hormoodka ah, waxaan u taaganahay inaan soo saarno cunno kala duwan oo aad u fiican oo aan u siino macaamiisheena xalal iyo xulashooyin aan qiimo, tayo iyo isku haleyn midna aan la barbar dhigi karin.